Efa nogadraina sy nampidirina am-ponja ireo olona nitarika ny hetsi-bahoaka nanoherana ny fitrandrahana, izay voalaza fa tsy mitera-bokatsoa ho an’ny mponina sy ahiana hamotika zavatra maro. Efa navoaka ireo olona nogadraina fa i Augustin Andriamananoro izay voalaza ho namatsy ara-bola ny hetsi-panoherana tsy nahazoana alalana ary lazaina ho mikononkonona fanonganam-panjakana indray no nosamborina. Tsy hay ihany koa izay tena fahamarinany fa saika hifampiraharaha sy hitaky volabe tamin’ny Sinoa ny tenany, kanefa vola tokony ho any am-paosin’ny mpitondra izany ary izay no nahatezitra ny fanjakana.
Nialoha ny fivorian’ny frankofonia dia efa nisy ny vaovao heno fa hiverina ny Sinoa aorian’izay fa fitadiavana fitoniana teto amin’ny firenena noho ny nampiantranoantsika iny fihaonana iraisam-pirenena iny no nanatsaharana ny fitrandrahana. Tsy nisy rahateo ny fanambarana ofisialy nataon’ny fanjakana fa nesorina tanteraka teo am-pelatanan’ny orinasa Jixiang Mines ny fahazoan-dalana hitrandraka na dia nitaky izany aza ny mponin’i Soamahamanina. Tsy hay na misy hifandraisany amin’ny mety hamerenana ny Sinoa any an-toerana izao fisamborana an’i Augustin Andriamananoro izao na fifanandrifian-javatra ihany. Mivoaka mantsy ny vaovao fa izay mianakendry hitarika vahoaka hanohitra ny fitrandrahana dia hosamborina sy hogadraina avokoa. Ireo mpitarika ny hetsika izay efa avy nogadraina rahateo dia mbola miambozona sazy mihantona avokoa ka tsy afaka ny hitari-tolona na hitabataba.